Gareth Bale oo 1.5m ku kiireysanaya Fanaanada reer Mareekan ee Beyonce - Jazeera FM
Gareth Bale oo 1.5m ku kiireysanaya Fanaanada reer Mareekan ee Beyonce
Laacibka Real Madrid Gareth Bale ayaa lagu soo waramaya inuu qrsheenaya in arooskiisa ay ka heesto fanaanada reer Mareykan ee Beyonce, waxana diyaar u ah inuu bixiyo £1.5m oo pound hadii ay codsigiisa aqbasho Beyonce..
28 jirkaan ayaa la filaya inuu la aqal galo gabadho ay mudada dheer wada socdeen ee Emma Rhys-Jonesin dhamaad xili ciyaareedkan, wargeyska The Sun ayaa sheegay in wakiiladda labada dhinac ay wada hadalo u socdaan.
Arooska Bale iyo Emma ayaa ka dhacaya Italy , saaxibadda Bale iyo kuwa Beyonce ayaa ka wada hadlay hadii ay sanadka dambe isku arki karaan xafladaan taas oo ka dhigan in heshiiska intiisa badan la isku afgartay.
Qiimaha ay halkaas habeen ku heesi doonto Beyonce ayaa lagu tilmaamay mid waali ah oo aaney ciyaartooydu horey u sameynin laakiin Bale oo mushaar fiican ka qaata Real Madrid ayaa la sheegay inuu fulinaayo balan uu horey saaxibtiis uga qaaday kaas oo ahaa in Beyonce ay ka heesi doonto arooskooda.
Weles ayaa sidoo kale la filaya iney ka dhacaan xaflado la xiriira arooskan.
The post Gareth Bale oo 1.5m ku kiireysanaya Fanaanada reer Mareekan ee Beyonce appeared first on Goolasha.net.
← Eden Hazard oo raba in uu u jihaysto Madrid iyo Chelsea oo Lacago waali ah ku yaboohaysa
De Bruyne oo ku maadaystay Pogba →